>(၂၃)နှစ်ကြာအုပ်ချုပ်လာသည့်တူးနီရှားသမ္မတ ဘင်းအလီပြုတ်ပြီ (VDO) | Ethnic Nationalities' Voice: Struggling Voices for Justice
>(၂၃)နှစ်ကြာအုပ်ချုပ်လာသည့်တူးနီရှားသမ္မတ ဘင်းအလီပြုတ်ပြီ (VDO)
ပြည်သူ။ခင်ဗျားအနာကိုကြည့်ပါ၊ခင်ဗျားအနာကိုကြည့်ပါ၊ပြည်သူလူထုတွေအများကြီးဘဲ၊ကျနော်တို.ကတာဝန်ရှိသည့်သူတွေဘဲ၊ပညာတတ်သည့်သူ တွေဘဲ၊ကျနော်တို.ကိုကျနော်တို.တာဝန်ယူနိုင်တယ်၊ကျနော်တို.ကိုကျနော်တို.စောင့်ရှောက်နိုင်တယ်၊ Look around you! Look around you! there are lots of people who can take over. We are responsible. We are educated. We have, we can take care of ourself.
ပြည်သူ။ သူနုတ်ထွက်စေချင်တယ်၊ကျမတို.ကိုဒီမိုကရေစီဘာညာသူဖော်ဆောင်ပေးမယ်လို.သူပြေသမျှကိုကျမတို.မယုံဘူး၊သူ.အတွက်အကောင်း ဆုံးကပြောင်းလဲဖို.သို.မဟုတ်ထွက်သွားဖို.ဘဲရှိတယ်၊
လေပတ်ကြာအောင်ပြည်သူလူထုများလမ်းပေါ်ထွက်ဆန္ဒပြပြီးနောက်ယခုလိုတူးနီရှားသမ္မတ ဘင်းအလီကပြည်ပသို.ထွက်ပြေးခဲ့ရပြီးသူဘယ်မှာရှိ နေသည်ကိုအတိအကျမပြောနိုင်ပေမဲ့ဆော်ဒီအရေဗီယားနိုင်ငံသို.ရောက်ရှိနေတယ်လို.ပြောပါသည်၊သမ္မတဘင်းအလီဖြုတ်ချခံရပြီးနောက်ဝန်ကြီး ချုပ်မိုဟာမက် ကနိုးရှီးကရွေးကောက်ပွဲကျင်းပသည့်အချိန်အထိနိုင်ငံတော်ကိုထိန်းသိမ်းထာမည်လို.ရုပ်မြင်သံကြားမှာကြေညာသွားပါသည်၊သမ္မတ ဘင်းအလီကိုဘာကြောင့်ရာထူးကနေပယ်ရှားခဲ့သလဲဆိုတာကိုသေသေချာချာမရှင်းလင်းခဲ့ပေမဲ့ ”သမ္မတအနေနဲ.ယာယီအားဖြင့်သူ.တာဝန်ကိုထမ်း ဆောင်ဖို.မတတ်နိုင်သည့်အတွက်ကြောင့်ဝန်ကြီးချုပ်ကသူ.လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုကိုထမ်းဆောင်မည်ကိုဆုံးဖြတ်လိုက်ကြောင်း ”ကြေညာခဲ့သည်၊
ဘင်းအလီဟာအသက် (၇၄)နှစ်ရှိပြီးပြင်သစ်နိုင်ငံမှာစစ်ပညာသင်ကြားခဲ့သူဖြစ်သည်၊ပြင်သစ်ကနေတူးနီးရှားလွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်ပိုင်းနိုင်ငံ ခေါင်းဆောင်နှစ်ယောက်သာရှိခဲ့ကြောင်းလေ့လာရပါသည်၊
တူးနီးရှားနိုင်ငံဟာ(၁၉၅၆)ခုနှစ်မှာပြင်သစ်ဆီလွတ်လပ်ရေးရခဲ့ပြီးပထမဦးဆုံးသမ္မတ ဟဘစ် ဘိုဂူးဘ (Habib Bourguiba)ကတိုင်းပြည်ကိုနှစ်(၃၀) ကြာအောင်အုပ်ချုပ်ခဲ့သည်၊(၁၉၈၇)တွင်သမ္မတ ဟဘစ်ဘိုဂူးအသက်ကြီးပြီးမကျန်းမာမသန်.စွမ်းနေသည့်အချိန်မှာ ဘင်းအလီကသွေးစီးမှုမရှိဘဲ အာဏာသိမ်းလိုက်သည်၊သူ.သမ္မတသက်တမ်း(၂၃)နှစ်နီးပါးကြာလာသော်၊ဗမာပြည်အာဏာရှင်သန်းရွှေကဲ့သို.သက်ဦးဆံပိုင်စနစ်ဖြင့်နေထိုင်လာခဲ့ ပြီးတိုင်းပြည်ကိုအနိုင်ကျင့်အုပ်ချုပ်ခဲ့သည်၊
>ဝေါ်လေဒေသ တိုက်ပွဲ ပြင်းထန်လာ